FANDANIAM-BOLAN’NY KAOMININA ANTANANARIVO : Nividy fiara 385 tapitrisa Ar Ravalomanana Lalao | NewsMada
Niroso amin’ny fandaniam-bola tsy am-piheverana Ramatoa ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao. Nahatratra 385 tapitrisa ariary ny tentim-bidin’ny fiara, izay nataony amin’ny anaran’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Ny tena zava-doza, tsy nandalo filankevitra monisipaly ny raharaha, fa mandidy dia homana Ramatoa ben’ny Tanàna…
Tantely afa-drakotra! Izay no manjo ny fandaniam-bola tsy am-piheverana tanterahin-dRamatoa ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao sy ny ekipany eo anivon’ny Kaominina, ankehitriny. Nisy fiara raitra dia raitra, Toyota mivolombatolalaka, mitondra ny laharana ..77 WWT, izay efa nampiasainy taloha sy nandritra ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana ben’ny Tanànan’Antananarivo ireny. Ny mahatalanjona, ny 15 febroary 2017 teo, izay vao fantatra fa novidina io fiara raitra dia raitra io, ary mitentim-bidy hatramin’ny 385.020.000 ariary, izay natao tamin’ny anaran’ny Kaominina. Nandritra ny adihevitra momba ny tetibola 2017 anefa, tsy nisy mihitsy resaka fividianana fiara ho an-dRamatoa ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao izany. Mandidy dia homana ny volan’ny Kaominina, araka izany, ny eo anivon’ny mpitantana. Ambentin-tenin’ny eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra mpanatanteraka ny filazana fa misedra fahasahiranana ny fitantanana ny tanàna, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola, noho ny tsy fahazoana ny fanampiana avy any amin’ny Fitondrana foibe. Saingy, miharihary izao, fa gaboraraka ny fitantanana ara-bola eto anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Laniana amin’ny haitraitra ny volam-bahoaka, tokony hoentina hampandrosoana ny tanànan’Antananarivo.
Tsy mazava ny fomba fitantanana
Nandritra ny tatitra manokana ireo zava-bita notanterahin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, tamin’ny fivoriana ara-potoana farany teo, tsy mazava ny fomba fitantanana, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola. Efa nanatsinkafona ireo raharaha tsy mazava ireo, ny avy eo amin’ny Mpanolotsaina monisipaly avy amin’ny mpanohitra. Voahitsakitsaka ny voalazan’ny lalàna 2014-020, andininy faha-80 ny amin’ny tokony hanaovany tatitra ara-bola, ao anatin’ny fivoriana ara-potoana voalohany, saingy tsy hita soritra izany. Ny antony, raha ny tatitra farany teo, nataon’ny mpanatanteraka eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra safobemantsina fotsiny, io tatitra ara-bola io, fa tsy hita amin’ny antsipiriany. Ohatra ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eto amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, toy ny lalana, tohatohatra, ny sarona tatatra, ny toeram-piandrasana taksibe, ny fanavaozana ireo tranon’ny Kaominina, toy ny Boriborintany, ny EPP, ny biraon’ny tsena…Tsy misy filazana hoe toerana aiza ary mitentim-bidy ohatrinona ny vola lany? Tsy ahitana sorabola na iray aza tao anatin’ny tatitra manokana notanterahin’ireo mpitantan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Maizina tanteraka ny tatitra ara-bola sy ny mety ho vinavinam-pandaniana amin’ny asa hotanterahina manaraka.
Iaraha-mahita toa tafika andrefan-tanàna fa misedra fahasahiranana ara-bola ny ankabeazan’ny Kaominina manerana an’i Madagasikara. Ho an’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, atao am-boletra ny fitantanana ara-bola no tsy mazava avokoa ny fandaniana rehetra. Mbola ananan’ny Tranom-printy nasionaly trosa 250 tapitrisa ariary ny Kaominina Antananarivo renivohitra, amin’izao fotoana izao, saingy tsy mety mandoa izany ny ben’ny Tanànan’Antananarivo renivohitra, Ravalomanana Lalao. Ny fomba fialany bala, ny filazana fa trosa efa talohan’ny nahatongavany, hono, io. Aiza ho aiza ny fametrahana ny fitohizan’ny fitantanana ny raharaham-panjakana? Vokany, tsy mety manome ny “quittances” sy “tickets de marché” intsony ny eo anivon’ny Tranom-printim-pirenena. Iaraha-mahalala fa tsy ara-dalàna raha vao tsy “quittances” avy any amin’ny Tranom-printim-pirenena no ampiasaina.
Raha ohatra ka hanao “certification” na “légalisation” eny anivon’ny boriborintany eto an-drenivohitra, ny olona mandoa vola, tokony hahazo “quittance” manamarina ny fandraisana ny vola. Izany vola raisina izany, tokony hisy “quittance” mivoaka avy any amin’ny Tranom-printim-pirenena. Tsy manome anefa ny eo anivon’ny boriborintany, saingy ny vola raisin’izy ireo hatrany. Mazava, araka izany, fa lasa halatra hita-maso ny raharaha. Manam-bola hividianana fiara raitra dia raitra sady lafo ny ben’ny Tanàna, saingy minia mikimpy ny trosa tokony haloa. Vokany hiitatra tahaka ny sima misioka ny halatra amin’ny endriny samihafa eny anivon’ny boriborintany.